Ụgbọ elu si Sharm el-Sheikh gaa n'ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo na AlMasria Universal ụgbọ elu ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu si Sharm el-Sheikh gaa n'ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo na AlMasria Universal ụgbọ elu ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
N'ime ọnwa mbụ ka ịmalitegharị ụgbọ elu na-aga ebe ntụrụndụ Egypt, okporo ụzọ ndị njem na-aga n'ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo karịrị puku mmadụ iri abụọ.
Ụgbọ elu mbụ nke ụgbọ elu AlMasria Universal na-esi n'anwụ anwụ Sharm el-Sheikh banye n'ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo.
AlMasria Universal ụgbọ elu na-arụ ụgbọ elu abụọ kwa izu na Hurghada na Sharm el-Sheikh na Wednesde na Sọnde, Fraịde na Satọde, n'otu n'otu.
Ugbu a, njem ndị Egypt bụ otu n'ime ndị ama ama n'etiti ndị njem ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo.
Ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo nabatara ụgbọ elu mbụ nke AlMasria Universal ụgbọ elu, nke sitere na anwụ anwụ Sharm el-Sheikh.
Ụgbọ elu na-arụ ụgbọ elu abụọ kwa izu na Hurghada na Sharm el-Sheikh na Wednesde na Sọnde, Fraịde na Satọde, n'otu n'otu. Ọbịbịa n'ọdụ ụgbọ elu Domodedovo na 09:20, ọpụpụ na 10:20.
Ugbu a, njem ndị Egypt bụ otu n'ime ndị ama ama n'etiti ndị njem n'ọdụ ụgbọ elu. N'ime ọnwa mbụ ka ịmalitegharị ụgbọ elu na -aga ebe ntụrụndụ Egypt, njem ndị njem karịrị puku mmadụ iri abụọ.
AlMasria Universal ụgbọ elu bụ ụlọ ọrụ ụgbọelu Ijipt nkeonwe. Onye na -ebu ụgbọ elu na -arụ ụgbọ elu ụgbọ elu oge niile na nke ọchụnta ego na -aga ebe 14, nwere ahụmịhe afọ 13 na ọrụ nke ndị njem.
Domodedovo, na mpaghara “Domodedovo Mikhail Lomonosov International Airport” bụ ọdụ ụgbọ elu mba ofesi dị na Domodedovo, Moscow Oblast, Russia, kilomita 42 na ndịda-ndịda ọwụwa anyanwụ site na etiti Moscow. Ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo Mikhail Lomonosov bụ otu n'ime ọdụ ụgbọelu kacha ibu na Russia. N’afọ 2020, ọdụ ụgbọ elu jere ndị njem nde 16.4 ozi. Ndị otu njikọ ụgbọ elu ụwa nke gụnyere Star Alliance na oneworld ahọrọla Ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo maka ụgbọ elu ha na Moscow.
AlMasria Universal Airlines bụ ụgbọ elu nkeonwe Egypt nke dabere na Egypt. Ụgbọ elu ahụ na -arụ ọrụ emebere yana ọrụ ịgba akwụkwọ si Egypt. 'AlMasria' sitere na okwu Arabic maka 'Egypt'.